रायोको सागका यस्ता छन् गुण तर होसियार यस्तो बेलामा यसरी खानु हुन्न - ज्ञानविज्ञान
जानकारीका लागि रायो, तोरीको परिवारमा पर्ने तोरी हो जस्तै तर तोरीको भन्दा ठूलो पात भएको मूख्य रूपमा तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिने तेलहन बाली हो। यसको खेती मूख्य रूपमा साउन-भदौ देखि सुरु गरिन्छ र यो पौष-माघ सम्म रहन्छ । यसलाई हरियो छँदै टिपेर गुन्द्रुक पनि हाल्ने गरिन्छ । रायो खेतीको लागि सिँचाइ र पहारको आवश्यकता पर्दछ।
सागसब्जीमा रायोलाई राजा मानिन्छ । स्वादका हिसाबले मात्रै नभएर यसको पौष्टिकता र औषधिय गुणले पनि यो राजा भनिन लायक छ । विभिन्न पौष्टिकताले भरिएको रायोमा निकै सकारात्मक कुराहरु छन् यसका साथै रायोको तरकारी खाँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
१.डन्डीफोर कम गर्छ
रायोको सागमा पाइने तत्व डन्डीफोरको समस्यालाई पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ । छालालाई इन्फेक्सनबाट जोगाउने तन्तुलाई यसले बलियो बनाउँछ ।
२.गर्भवतीलाई लाभ गर्छ
गर्भवती महिलालाई वाकवाकी आउने, टाउको दुख्ने आदि समस्या देखिन्छन् । शरीरमा भिटामिन केको कमीका कारण यस्तो हुनेगर्छ । रायोको सागमा भिटामिन के प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले यो गर्भवती महिलाका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
रुघाखोकी लागिरहने मानिसले रायोका साग खानुपर्छ । रायो भिटामिन सीको राम्रो स्रोत हो । भिटामिन सीले रुघाखोकी, निमोनिया, फोक्सोको इन्फेक्सन आदिबाट जोगाउँछ ।
४.पत्थरी हुन दिँदैन
पिसाबनलीमा पत्थरी हुने जोखिमलाई पनि रायोको सागले कम गरिदिन्छ । पथरी भइसकेकालाई पनि यसले लाभ गर्छ ।
५.बाथका रोगीलाई राहत दिन्छ
६.जोर्नी र हड्डी बलियो बनाउँछ
रायोको सागमा भिटामिन–के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन के ले हड्डीलाई आवश्यक पर्ने खनिज प्रदान गर्छ । साथै, यसले रगत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्याल्सियम जम्मा हुने क्रम पनि रोक्छ । हड्डी खिइने समस्या भएकाहरूका लागि रायोको साग लाभकारी हो ।
७.महिनावारीमा राहत दिन्छ
रायोको सागमा पाइने भिटामिन–केले महिनावारीका बेला जीउ दुख्ने समस्याबाट राहत दिन्छ । शरीरका विकार फाल्छ ।
८.शरीरका विकार फाल्छ
रायोको सागमा भिटामिन ए, सी र के प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यी तीनवटै तत्वले एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छन् । रायोको सागमा पाइने म्याग्नेसियम र फोलेटजस्ता तत्वले शरीरमा जम्मा भएका विकारलाई विभिन्न माध्यमबाट शरीर बाहिर निकाल्छन् ।
१०.आँखा तेजिलो बनाउँछ
रायोको सागमा भिटामिन ए पाइन्छ । जो स्वस्थ आँखाका लागि अपरिहार्य हो । यसले रतन्धोलगायत आँखाका सम्पूर्ण समस्याबाट राहत दिलाउँछ ।
११.मुटु बलियो बनाउँछ
रायोको सागमा पाइने भिटामिन केले प्रोस्ट्रेट, कोलोन, पेट, नाक र मुखको क्यान्सर लाग्ने जोखिम कम गर्छ । कलेजोको क्यान्सर भएकाहरूका लागि पनि रायोको साग खानु राम्रो हो भोजनमा रायोको साग नियमित खाँदा क्यान्सर लाग्ने जोखिम कम हुन्छ ।
रायोको साग खाँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी
रायोको साग जुनसुकै अवस्थामा पनि खान भने हुदैन । विभिन्न केहि अवस्थामा रायोको सब्जी खानु उपयुक्त हुदैन । त्यस्तै जुनसुकै मसलामा पनि रायोको सब्जी खानु ठिक हुदैन । यसैले रायोको साग खाँदा तलका कुराहरु याद गर्नुहोला ।
रायो बढी पकाउँदा यसमा पाइने उपयोगी पदार्थ हराएर जान्छन् । यसैले रायोको सागलाई बेस्सरी पकाउँने नगर्नुहोला । थोरै नुन राखेर केहि बेर मध्यम तापमा पकाएको रायो स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाकारी हुन्छ भने स्वादिलो पनि हुन्छ ।
यसै पनि सागमा हत्तपती बेसार त कसैले पनि हाल्दैन तर धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेसार पनि असाध्यै धेरै औषधिय गुणले भरिएको मसला हो । यसैले यसलाई जेमा पनि अलिअलि मिसाएर खाँदा फाइदा हुन्छ तर त्यस्तो सँधै हुदैन । रायोको सागमा बेसार हाल्दा त्यसले स्वास्थ्यमा हानी गर्छ ।
रायोको साग रातीको भोजनमा खानु हुँदैछ । राती रायो पच्न गाह्रो हुन्छ । बिहान अथवा दिउँसोको खाना र खाजामा रायोको साग खानु ठीक हो ।
रायोको दानाको के फाइदा ?
रायोको सागको मात्रै होइन, रायोको दानाको पनि बेग्लै विशेषता हुन्छ । रायोको दानाको केहि औषधिय गुणहरु तल बमोजिम छन् :
– पाचनशक्ति कमजोर छ भने रायोको दाना पिसेर यसलाई तरकारीमा हालेर हप्तादिनजति खानाले पाचनशक्ति बलियो बन्दै जान्छ । यसो गर्नाले भोक नलाग्ने समस्या पनि हटेर जान्छ ।
– रुघा लागेमा रायोको दाना पिसेर यसलाई महमा मिसाई सुँघ्नाले सञ्चो हुन्छ ।
– रायोको गेडाको चूर्णलाई तातोपानीमा हालेर घोली कुल्ला गर्नाले दाँतको दुखाइ कम हन्छ ।
– बच्चाको ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने बानी छ भने उसलाई रायोको चूर्णलाई चिसोपानीमा मिसाएर पिलाउने गर्नुपर्छ ।
– रायोको सागमा भिटामिन–ए प्रशस्त पाइने भएकाले यसले रतन्धोलगायत रोगबाट केटाकेटीलाई बचाउँछ ।
Topics #रायो #सगशब्जी #समस्या
Don't Miss it सहि प्रयोग गर्दा हरियो धनियाँले स्वाद र वास्नासँगै शरिरलाई यति फाइदा गर्छ
Up Next तरकारी र दालका रुपमा मात्रै होइन चना खाने तरिका, यस्ता छन् कायापलट गर्ने अरु तरिकाहरु
यस्ता छन्, हत्केला चिलाउनका कारण र बच्ने उपाय
कार्पल टनेल सिन्ड्रोमः (नाडीेको हड्डीको नसारुमा भएको चोटपछि हात र औलामा हुने पीडा) पनि हत्केला चिलाउँछ । शरिरमा मध्यम खालको…
यी खानेकुरा, सुत्नुअघि खानुहुँदैन
केही तरकारी फलफूल र तरकारी स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो । यसले शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने गर्छ । तर, कुनै–कुनै फलफूल…
मस्तिष्कसंग सम्बन्धित केही तथ्यहरु अचम्म लाग्दा छन्, जान्नुहोस
१. मस्तिष्कले काम गर्दा चाहिने शक्तिले करीब २५ वाटको एउटा बल्ब बाल्न काफी हुन्छ । २. हरेक मानव मस्तिष्कमा हरेक…
यस्ता व्यक्तिले उखुको रस खानुहुँदैन
– उखुको रसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउँछ । यदि तपाई मधुमहेको रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईले उखुको रस पिउँनुहुँदैन । यो…
कलेजोमा जम्मा हुने कोलेस्टेरोल यी खानाहरू घटाउछ जानिराखाैँ
कोलेस्टेरोल के हो ? कोलेस्टेरोल शरीरका प्रत्येक कोषहरूमा पाइने नरम चिल्लो पदार्थ हो । यसको उत्पादन प्रमुखरूपमा कलेजोमा हुन्छ ।…